यसरी अनसन तोडे डा. गोविन्द केसीले
शिरिश मान महर्जन काठमाडौं - आइतबार, असोज २५, २०७७
अनसनको २८औं दिनमा डा‌. गाविन्द केसीले अनसन तोडेका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा उनलाई त्यहाँका सरसफाइ कर्मचारी विकास परियारले जुस खुवाएका थिए। आयोमेलका शिरिषमान महर्जनले त्यहाँबाट पठाएका तस्बिरहरू-
खसी किन्न हुलका हुल
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले साेमबारदेखि खसीबोका बेच्न सुरु गरेको छ। प्रतिकिलो ५५० रुपैयाँमा खसी तथा बोका बिक्री सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। मंगलबार कम्पनीमा खसी किन्नका लागि ठूलै भीड लागेको थियो। साैरभ रानाभाट
यो दसैंमा सुनसान शक्तिपीठ
कोरोना कहरसँगै भित्रिएको दसैंका बेला शक्तिपीठहरु सुनसान छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि गत चैतमा भएको लकडाउनसँगै बन्द भएका शक्तिपीठ तथा धार्मिक स्थलहरु अझै खुल्न सकेका छैनन्। साैरभ रानाभाट
परम्परानुसार काठमाडौँको हनुमानढोका दरबारस्थित दसैंघरमा आजैदेखि वैदिक विधिअनुसार जमरा राखी शक्तिस्वरुपा देवीकोपूजाराधना सुरु भएको छ। साैरभ रानाभाट